Apple Music Inopa Hits Pasi Pose neiyo 25 Yakawanda Inotepfenyurwa Nziyo Munyika Dzinopfuura 100 Nyika | Ndinobva mac
Apple Music inopa Hits kutenderera pasirese nenziyo dzinoteererwa makumi maviri neshanu munyika dzinopfuura zana
Nokuburitswa kweIOS 14.5, Apple yakatora mukana weichi chiitiko kuburitsa seti yemitambo yekutamba inoratidza nziyo makumi maviri neshanu dzakaridzwa zvakanyanya munyika dzinopfuura zana kubva pasirese pasirese, kuve mukana wakanakisa wekuziva-ruoko izvo zvinonyanya kunzwika mune dzimwe nyika / maguta.
Idzi nyowani nyowani dzatinogona tsvaga muChikamu chekutsvaga, zvese kubva ku iPhone, iPad kana Mac. Kana usiri Apple Music mushandisi, unogona kutarisa pane ino chinyorwa kuburikidza Iyi link. Kubva pane ino peji rewebhu, iwe unogona zvakare kuteerera kune anotamba mazita.
Anotaura kuti nziyo dziri pane idzi playlists inogadziridzwa zuva nezuva. Kune ariko pari zvino anodarika zana maguta, asi iyo Cupertino-based kambani inogona kuwedzera huwandu hwemaguta. Rondedzero yakazara yemaguta ari chikamu chechikamu chitsva ichi cheApple Music ndeaya:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Music inopa Hits kutenderera pasirese nenziyo dzinoteererwa makumi maviri neshanu munyika dzinopfuura zana
Nomad anotangisa mini yekuchaja base yevanonyanya kufamba
Iyo yekutanga tirera yeiyo yePanyama akateedzana yave kuwanikwa